आजको बन्दको कस्तो प्रभाव परेको छ ? गाडी चलेका छन् कि छैनन् ? – सुदूरखबर डटकम
आजको बन्दको कस्तो प्रभाव परेको छ ? गाडी चलेका छन् कि छैनन् ?
तर यता सुदूर पश्चिम प्रदेशमा भने सुमसान रहेका छन, मुख्य बजार केही मात्रामा खुले पनि गाडी भने चलेका छैनन।